Su'aalaha la isweydiiyo - Chengdu Duolin Electric Co., Ltd.
Gariiradda iyo Inductors
Mashiinka kululaynta induction soo noqnoqoshada sare
Mashiinka kululaynta induction soo noqnoqoshada dhexdhexaadka ah
Mashiinka kululaynta induction soo noqnoqoshada ultrasonic
Nidaamka qaboojinta biyaha
Mashiinka Keenista Induction
Mashiinka foorarsiga Induction
Mashiinka foorno -gelinta
Mashiinka adkaynta Induction
Mashiinka alxanka & alxanka
Mashiinka daaweynta kuleylka baarka dheer
Haa, waxaan ubaahanahay dhammaan amarrada caalamiga ah inay lahaadaan tirada ugu yar ee socota. Haddii aad raadineyso inaad dib u iibiso laakiin aad u tiro yar, waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso websaydhkeena
Haa, waxaan bixin karnaa dukumiintiyada ugu badan oo ay ku jiraan Shahaadooyinka Falanqaynta / Ku -habboonaanta; Caymis; Asalka, iyo dukumiintiyada kale ee dhoofinta halka looga baahdo.
Shaybaarrada, waqtiga hoggaamintu waa qiyaastii 7 maalmood. Soosaarka ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib helitaanka lacagta deebaajiga. Waqtiyada hogaamintu waxay dhaqan galayaan marka (1) aan helno deebaajigaaga, iyo (2) waxaan helnay ogolaanshahaaga ugu dambeeya ee alaabadaada. Haddii waqtiyadayada hogaamintu aysan ku shaqeyneynin waqtigaaga ugu dambeeya, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonnaa in aan wax ka qabanno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Qiimaha dhoofintu waxay kuxirantahay habka aad dooratay inaad alaabta ku hesho. Express caadi ahaan waa habka ugu dhaqsaha badan laakiin sidoo kale ugu qaalisan. Xeerarka badda waa xalka ugu fiican ee qaddarka badan. Si sax ah sicirka xamuulka waxaan ku siin karnaa oo keliya haddii aan ogaanno faahfaahinta xaddiga, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Wadada 112th Hancheng Xindu Zone Warshadaha Chengdu Shiinaha.